Kokubili ngabantwana nangabantu abadala namuhla azi kahle ukuthi Santa Claus uhlala Ustyug Omkhulu. Lena patrimony yena, indawo lapho inganekwane yaqhuma. Eqinisweni, ukuthandwa Ustyug Omkhulu waqala usheshisa ngemva iphrojekthi waqala igcwaliseke "Santa Claus - Veliky Ustyug". Ngaphezu kwalokho, lokhu yokuhlala fabulous ekuqaleni wakhulelwa njengendawo isihambi isabelomali, okuyinto ongeza wonke umuntu ukuba ujabule nezingane zabo.
Abamatasa inketho kakhulu kuyoba uhambo usuku olulodwa. Nokho, uma ufuna ukuchitha kule yokuhlala fabulous kwezinsuku ezimbalwa, uzodinga ehhotela Veliky Ustyug. Namuhla sibheka ehhotela ngaphansi kwegama "Dvina", it is okukhulunywa kakhulu ngawo ukubuyekeza kwabo izivakashi bajabule.
Ihhotela "Dvina" Uphi
Ikhona enhle kakhulu emzini - kuyingxenye zomlando ngakho. Ihhotela ukhululekile kunazo zonke Ustyug Mkhulu lapha. Lapha ezithakazelisayo ukuchitha kusihlwa ukuhambahamba ngasogwini izinto mlando. Ihhotela lizungezwe izikhumbuzo zomlando, izitolo, zokudlela kanye amathilomu, ukuvakasha enhle. amaminithi angu-5 kuphela ukwabelana ngayo leli hhotela esikalini futhi yokuhlala Santa Claus, okuyinto cishe izolahleka izingane zakho. Futhi abazali ungachitha isikhathi ukuhambahamba ngasogwini ukuvakasha zibabaza indawo enhle kakhulu.
Okuyojabulisa izivakashi zabo "Dvina" - Ihhotela e Veliky Ustyug? Yiqiniso, okokuqala - iyona ukusondela yehlathi elivikelwe, kungene umoya ohlanzekile futhi ithuba ukuhamba usuku lonke. Ihhotela has a kuqashelwe yokupaka nge video ukubhekwa. Kuyinto elula kakhulu izivakashi ezifike ukuphumula ezokuthutha.
Ihhotela has esitolo ikhofi abantu 50 kanye eliqatjhiweko ethokomele, okuyinto yakhelwe 10 abantu.
Ihhotela e Veliky Ustyug endaweni yokuqala kufanele abe yokuhlala ethokomele ukuthi abahambi bakwazi uphumule futhi ubuthongo. Lena mini-ehhotela, okuyinto bunamandla kakhulu. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi e esiqongweni kaKhisimusi amaholide zokuhlala kumele zibhalise kusengaphambili, kodwa ehlobo kukhona cishe njalo kuyatholakala.
Sesikhathele ukubukeka kancane Ukuhlolisisa lokho amathuba sinikeza ehhotela "Dvina" (Ustyug Omkhulu), kanye akutshele mayelana intengo amasevisi.
Inketho ethandwa kakhulu - a double "umnotho". Kukhona imibhede emibili twin ukuthi bangase axazulule ababili abadala, futhi ngaphezu kwalokho kungenzeka ukuze anakekele uhlaka umntwana. Kulesi endaweni eyodwa liyakunikhulula emuva 1300, futhi ezimbili - in ruble 1800 ngosuku. Njengoba ubona, ihhotela "Dvina" (Ustyug Omkhulu) inikeza amazinga impela ezingabizi.
Single igumbi elisophahleni kuhlanganisa konke odinga futhi izobiza ruble 1600 ngosuku. "Amazinga" Ukuba Ongashadile Futhi double bavela ruble 1800 ngosuku isihlalo esisodwa, ezimbili - 2400 k. Okokugcina, ivulekile "suite junior" nge ephasijini, kanye nekamelo lokugezela ahlukene ungaphakathi khona ruble 3500 ngosuku.
Ngokuqinisekile wonke umuntu ufuna ukwazi, lokho okuvelayo yakho kusukela kubavakashi wangaphambili, okuyinto wababonisa ehhotela "Dvina" (Ustyug Omkhulu). Izibuyekezo zinhle kakhulu, ukuthi usenza. close kakhulu yokuhlala Santa Claus, lapho ungakwazi ukuhamba nezingane zakho. Amakamelo mancane, kodwa ukhululekile kakhulu, has konke okudingayo ukuze yokuchitha isizungu evamile. Abasebenzi nobungane. I negative kuphela, okuyinto isehlane yizivakashi - ukungabi a lezitsha.
iholide emangalisa epaki zikaphayini uzoninika leli hhotela emangalisayo. amamitha angu-300 nje ukwehlukanisa ke kusukela emnyango Ustyug Omkhulu. Amahhotela, amahhotela kule yokuhlala fabulous kuyaqabukela awunalutho, kepha "Gleden" kuyodingeka incwadi indawo kahle ngaphambi kokuba ngivakashe ehlosiwe.
Uzokubona isitayela engenakulinganiswa futhi service lihle esikhona lapha. Ihhotela kunikeza umuzwa wokuthi ukhona endaweni Manor olunothile kwekhulu XIX.
Uma ucabangela amahhotela best Omkhulu Ustyug, akumelwe sikhohlwe eyinkimbinkimbi izivakashi igama elifanayo. Kuyinto enkulu kunazo zonke futhi esimanjemanje kakhulu yokuzilibazisa isikhungo engxenyeni mlando edolobheni. Thina zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela 90 amakamelo ezingaba afake 175 abantu ngesikhathi. Ngaphandle zokuhlala ethokomele degrees wenduduzo obuhlukahlukene, kukhona ama-sauna ezimbili swimming pool, ejimini futhi solarium, izinwele nobuhle salon, kanye nemidlalo kuma-nightclub.
Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa - leli ipharadesi yezethameli abasha, abalandeli anomsindo futhi kumnandi hilarious. Ukuze iholidi lomkhaya kungcono ukukhetha ihhotela "Dvina", kuyafaneleka kakhulu ukuthatha umoya ngemva zeviki ngeze.
"Patrimony Santa Claus"
Ukuthola lapha, izingane kanye nabantu abadala bacwilisa ku inganekwane. Njengoba uma kusuka emakhasini epics Russian ehla ezibaziweyo ezimbili storey umbhoshongo, okuyinto kahle ngakho afanele ukuze landscape ihlathi ebusika. Ihhotela wavula kuphela ngo-2013, futhi kakade yazuza elandelayo omkhulu. Sekukonke kukhona 29 amakamelo. Lena umndeni iholide ethule. Izindleko abahlala lapha uyahluka ruble 2000-2500 ngosuku. Embhedeni owenezelwe kuyokulahlekisela ruble 500.
Zonke amakamelo satellite TV, eshaweni kanye yangasese. Ihhotela izipesheli yokupaka futhi ikamelo ilondolo, cafe kanye nesigaxa, isikhumbuzo esitolo. Ihora phambi edeskini. Ukwahlulela ngokubukeka izimpendulo zezivakashi - lena ehhotela ukhululekile kakhulu futhi benobungane, lapho ukhona njalo ngamukelekile. Excellent ukudla Interiors kakhulu, ihlanzekile futhi icocekile kuzo zonke izindawo - konke lokhu kuyisihluthulelo induduzo yakho futhi ajabule.
Vigo Ihhotela 4 * (Nessebar, Bulgaria): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Okucacile kwe-Idealization Concept Nendima Yayo Kubudlelwane Bokwebucayi
Indlela yokwenza crab isaladi nezinye izimfihlo uyinkosikazi ezinhle